Shaqaale Turki ah oo u shaqeynayay qunsulka Mareykanka ah oo lagu soo eedeeyay Afganbi…….. – Walaal24 Newss
Dacwad oogayaasha Turkiga waxay raadinayaan xukun xabsi daa’in ah shaqaalaha maxaliga ah ee qunsuliyada Mareykanka ee Istanbul ku eedeeyay in ay isku dayeen in ay afgembiyaan xukuumadda iyo basaasnimada.
Qoraal 78-bog ah oo ka dhan ah Turkiga Metin Topuz, oo lagu xiray tan iyo Oktoobar 2017, ayaa sheegay in Topuz uu “xidhiidh aad u qoto dheer la yeeshay saraakiisha bilayska ee hoggaaminayey baaritaankii la dagaallanka musuqmaasuqa ee 2013-ka taas oo ku xirnayd saraakiisha sar sare ee dawladda.
Xukuumadda Turkiga ayaa ku eedaysay wadaadka Maraykanka ee Fethullah Gulen in uu isku dayay in uu kufaraxo baaritaankaas oo uu ku tilmaamay inuu yahay shabakad argagixiso. Gulen ayaa sidoo kale lagu eedeeyay rabshadihii fashilmay ee 2016-ka, laakiin wuxuu beeniyay eedeeymaha.
Garsoore ayaa go’aamin doona haddii kiisku sii socdo maxkamad, Topuz ayaa la xiray xannibaadda adeegga fiisaha in ka badan laba bilood.
Ciidamada Xoogga oo howlgal ku soo qabtay dhaliyaro ka tirsan kooxda Al-Shabaab
Inj Yariisow “Waa nasiibdaro in Wasaarada Caafimaadka DFS ay ka maseyrto Maamulka G/Banaadir”
Wariye CNN ka tirsan ayaa laga mamnuucay dhacdooyinka Aqalka Cad